Wariye Ali Aadan Muumin ayaa banaanka soo dhigay musuqa kajira Maxkamada Dalka - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Wariye Ali Aadan Muumin ayaa banaanka soo dhigay musuqa kajira Maxkamada Dalka
Wariye Ali Aadan Muumin ayaa banaanka soo dhigay musuqa kajira Maxkamada Dalka
Wariye Ali Aadan Muumin ayaa bartiisa Facebook ku dabaacay warbixin uu ku eegayo heerka musuqa kajira Maxkamada Dalka taaso shacabka Soomaaliyeed baryihii danbe bilaabeen iney Iska daayan aadista Maxkamada Dowlada taas badalkeedana ay uxukun tagaan Alshabaab oo ka cadaalad badan kana qarash yar Maxkamadaha Dowlada.
Wariyaha warbixintiisa ayaa ku bilaabatay sida tan.
Qeyb kale oo Muhiim ah inaad Ogaatid Xagga Maxkamadaha Rayidka.
Guddoomiyaha Maxkamadda Gobalka Banaadir Muuse Macalim Maxamuud, marka aad ka furaneysid galdacwadeed Maxkamadda Gobalka Banaadir waxaa lagu furtaa $200 laakiin Qasnadda dowladda waxaa lagu shubaa $100 oo iyada lafteeda dood ka taagantahay Xagga hufnaanta.
Waxaa kale oo ay sameysaa Maxkamadda uu isaga masuulka ka yahay Duplicate oo ah warqadda lahaanshiyaha dhulka oo la siiyo cidda ay ka lunto, taas oo iyada lafteeda aysan Maxkamadda Sharciyad u laheyn sidoo kale abuuri karta xasarad xagga dhulka ah.
Hadiiba ay dhacdo in muwaadin uu waayo warqadiisa lahaanshiyaha dhulka, waxa uu weydiisan karaa warqad kale Maxkamadda degmada ku taallo dhulka maqan.
$300 ayaa laga qaadaa dadka ay sidaas ku dhacdo mana lagu shubo Bankiga Dowladda taasi oo ah musuq kale oo u baahan jawaab.
Guddoomiyaha Maxkamadda Rafcaanka Abshir Cumar Cabdullaahi, marka aad sameysaneysid warqad wakaaladeed, waxaad bixineysaa $70 kaliya $20 ayaa lagu shubaa qasnadda dowladda, xafiiskan kaaliya-yaasha ka shaqeeyo waxaa lagu qasbay in ay jeebka dadweynaha furtaan, iska daa wax kale waxaa laga qaadaa qarashka lagu daabacayo documents ay u baahan-yihiin.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Baashe yuusuf Axmed, waxa uu la yimid Agaasime Cusub Cabdulqaadir Daa’uud Cigo, Kaaliye Cusub Cabduwahaab Xasan Ismaaciil, Darawalkiisa iyo qof kale oo aan weynay magiciisa laakiin sheeda nala ka tusay, waxa ay wada yimaadeen dhammaantood magacaabistiisa kadib laakiin hadda waa wada shaqaale mushaar ka qaata dowladda inkastoo aanu ognnahay in aysan dowladda hada jirta qaadan wax shaqaala ah, waxaa jiro dad kale oo kasoo horreeyay oo mudnaa in fursad la siiyo waasa bilowga musuqa Maxkamadda Sare.
Waaxda Dacwadaha Mahdi, Xisaabiyaha Guud Caydaruus, Xiriirka Garsoorka iyo Wasaaradda Cadaaladda Kiinaan, Qasnadda Safiyo, intaas waaxood waxaa maamula hal beel oo ay is xigeen guddoomiyaha Maxkamadda Sare, la taliyayaasha UNDO & IDLO waa laba shaqsi oo kale oo Iyana ay isku beel yihiin guddoomiyaha Maxkamadda Sare.
Marka laga tago u qaabilsanayaasha hey’adaha caalamiga ah iyo agaasimaha guud inta kale ma lahan qibrad shaqo iyo wax barasho toonna.
Laga soo bilaabo magacaabista guddoomiyaha Maxkamadda sare ilaa iyo hadda oo laga joogo ku dhawaad laba sano ma jiro go’aan wax tar ah oo ay soo saartay Maxkamadda Sare.
Arrinta sedaxda Masuul ay ka mideysanyihiin ayaa ah in ay danahdooda gaarka ah u isticmaalaan running cost oo ah qarashaadka lagu socod siinayo adeegyada dadweynaha.
Natiijadan ayaa muujineysa in isbadalkii garsoorka lagu hungoobay, waa halka ay Soomaalida ka dhihi jirtay “Faanoole Fari kama Qodna”
Naga filo warbixinno kale oo dheeraad ah.
Previous articleGudoomiyaha Barlamaanka Galmudug ayaa Kulan dag dag isugu yeeray xildhibaanada
Next articleMadaxa Xukuumada Galmudug oo bayaan ka soo saaray Doorashada Galmudug